Faallo: Hanti-dhowraha Guud ee Maamulka Maaliyadda Dowladda Federalka 2018 - Awdinle Online
Faallo: Hanti-dhowraha Guud ee Maamulka Maaliyadda Dowladda Federalka 2018
Qore Ex Wasiir
Dr Cabdi Culusow
Ugu horreyn warbixinta Hantidhowraha Guud (HG) Mudane Maxamed Maxamud Cali Afgoye soo saaray 8 Oktoobar 2019 ee ku saabsan Maamulka Maaliyadda iyo Hantida ee dhammaan hay’adaha Dowladda Federaalka 2018 waa tallaabo taarikhi ah oo u gogol xaareysa hagaajinta maamulka Maaliyadda Dadweynaha (Public Financial Management).Hay’adda lacagta Adduunka (IMF) oo muddo 6 sano ah Beesha Caalamka gaar ahaan IMF iyo Bankiga Adduunka daba taagan yihiin. Shuruudda ugu muhiimsan ee Barnaamijka IMF 4 (Staff Monitored Program SMP IV) waa daahfurnaanta maamulka maaliyadda dowladda federaalka. Sidaa darted, waxaa muhiim ah in Barlamaanka Federaalka Soomaaliya darso warbixintaas, taagero HG, soona saaro go’aan billad iyo aaman lagu siinayo HG Maxamed Maxamud Cali Afgoye. Waxaa kaloo muhiim ah in Guddiga Maaliyadda ee Barlamaanka Federaalka la kulmo dhammaan Hay’adaha Dowladda Federaalka ee ka baaqsaday gudashada xilkooda Maamulka Maaliyadda Dadweynaha.
Warbixinta HG waxay qeexeysa hay’adda laga rabo inay diyaariso Xisaab xir sannadeedka oo ah Wasaaradda Maaliyadda- Xafiiska Xisaabiyaha Guud.Hase yeeshe waxaa waajib ah in dhammaan hay’adaha dowladda federaalka u hoggansamaan awaamirta xisaabiyaha guud, gaar ahaan dakhli ururinta, ilaalinta habka kharaj bixinta, iyo xisaab celinta si xisaab xirka dowladda federaalka joogto u noqto, barlmaaanka federaalka iyo dadweynahana ula socdo.
Xogta Warbixinta HG hambaarsan tahay waxay adiyeysa eeddii Hay’adda Daahfurnaanta caalamiga ah (Transparency International). Madaama xisaab xir sannadeedka loo soo gudbiyay HG uusan dhammeystirneyn, Warbixinta waxay muujineysa dhalliilaha maamulka maaliyadda iyo hantida dadweynaha ee lagu soo arkay dhammaan hay’adaha dowladda: Madaxtooyada, 2 aqal ee Barlamaanka Federaalka, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradaha, Ciidammada Qalabka Sida, iyo Hay’adaha Madaxa bannaan. Wuxuu kaloo baaris gaar lagu sameeyay deeqaha laga helay Sacuudiga, Midowga Yurub, Hay’adda UN ee la yiraahdo UNPOS, iyo Bankiga Adduunka.
1. Warbixinta HG waxay daboolka ka qaadeysa in Wasaaradda Maaliyadda aysan sameyn xisaab xir dhammeystiran 2018. Waxaa xusid mudan in 2017 aan la sameyn xisaab xir barlamaanka federaalka ansixiyo. Marka la dhegeysto shirka Jaraa’id ee Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xildhiban Cabdiraxman Beyle qabtay waxaa laga fahmaya inay jiraan xisaabaad gaar ah oo uu asago la socdo haseyeeshe aan lala socodsiin Xisaabiyaha Guud, waayo wuxuu yiri waxay aheyd in HG na weydiiyo. Mas’uuliyadda xisaab xirka bileedka iyo kan sannadka waxay saaran tahay Xisaabiyaha Guud, mana jirto sabab Wasiirka wax looga weydiiyo. Waxaa kaloo la tuhusan yahay in Xisaaabiyaha Guud dhibaatooyin badan kala kulmay inuu xisaab xir rasmi ah ka helo Hay’adaha Dowladda sida Madaxtooyada, Barlamaanka Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda, Hay’adaha Difaaca iyo Amniga, Gobolka Benadir, Garsoorka, iyo hay’adaha madaxabannaan.
2. Warbixinta HG Waxay si gaar ah u tilmaameysa in Xisaabaadka la soo gudbiyay ay la xiriiran Xisaabta Khasnadda Guud (single Treasury Account) keli ah, isla markaana ay jiraan xisaabaad badan oo ka baxsan Xisaabta Khasnadda Guud.
3. Warbixintu HG waxay caddeyneysa in dakhliga Guud ee ku tala galka ee 2018 ahaa $ 297,072,158 hase yeeshe dakhliga dhabta ah ee soo xarooday noqday $276,296,234. Isdhinta ama hoos u dhaca dakhliga wuxuu noqday $ 20,775,924. Hoos u dhaca ku tala galka wuxuu ka yimid deeqaha dibeeda oo lacag dhan 31,684,747 aysan soo xaroon, halka dakhliga Gudaha kordhay lacakg dhan $10,909,423.
Kharajka Guud 2018 wuxuu ahaa $268,521,523. Farqida dakhliga guud iyo kharajka guud ee dhabka ah wuxuu yahay haraa $ 7,774,712.
4. Warbixinta HG dwaxay caddeyneysa inuu farqi weyn u dhexeeyo lacagta deeq bixiyayaasha soo gudbiyeen iyo Xisaabaadka Xisaabiyaha Guud soo gudbiyay. Farqiga deeqaha ka yimid Boqortooyada Sacuudiga, Midowga Yurub iyo Hay’adda Qarammada Midoobay iyo Xisaabaadka Wasaaradda Maaliyadda wuxuu gaaraya $ 18,386,732. Waxaa kaloo jira farqi u dhexeeya lacagta Bankiga adduunka ku wareejiyay Wasaaradda Maaliyadda oo ah $ 41,225,875 halka xisaab Xirka sannadeedka muujineyso in la helay lacag ka badan oo dhan $ 49,007,950. Ma cadda halka ay ka timid lacagta dheeriga oo dhan $ 7,782,075. Farqiyadahaas waxay muujinayaa inuu jiro khaladaad xisaabeed oo u baahan caddeyn deg deg ah.
Farqiyadaas waxay shaki gelinayaan xisaab xirka guud ee dakhliga iyo kharajka Dowladda Federaalka 2018.
Waxaa xusid mudan in HG uusan dhihin lacagtaas waa la lunsaday,waayo haddii uu HG sidaas yiraahdo waxaa laga rabaa inuu caddeeyo cidda/qofka lunsaday, cadadka la lunsaday, habka loo lunsaday, iy xaaladda cidda/qofka lunsaday ku sugan yahay: xarig, baxsad, ama dammaanad.
5. Warbixinta waxay tilmaameysa hay’ado dakhli qabtay, kaddibna isticmaalay dakhligaas ayadoo aysan ku shubin khasnadda dowladda. Waa sharci darro in hay’aduhu isticmaalan dakhli uusan Barlamanka u oggolaan.
6. Warbixinta HG waxay sheegeysa maamulxumo ka taagan Gaadiid tiro badan.
7. Warbixintu waxay sheegeysa kharajyo badan ee aan la hayn dokumenti caddeynaya.
8. Warbixinta waxay sheegeysa maamulxumo ka taagan shaqaalaha dowladda, Ciidammada, iyo guud ahaan heshiisyada iyo qandaraasyada dowladda gashay ama bixisay.
Warbixinta waxay tilmaameysa habka lagu saxi karo khaladaadka faraha badan ee lagu soo arkay Maamulka Maaliyadda iyo hantida dowladda. Gaar ahaan warbixinta waxay codsi u jeedineysaa Madaxda hay’adaha dowladda laga bilaabo Madaxweynaha JFS inay xil isk saaran dhowrista iyo hubinta ku dhaqanka sharciyada Maamulka Maaliyadda iyo hantida dowladda.
Previous articleDonald Trump oo lagu dhaliilay cunsuriyeynta Soomaalida Minneapplis
Next articleCiidamo Ku Biiray Maamulka Puntland kana soo goostay somaliland